Manomboka any Brezila i Ghimob satria ny malware dia mifantoka amin'ny apps banking | Androidsis
Vehivavy miasa miaraka amin'ireo tambajotra manerantany sy fiarovana ny angona
Tsy ho farany io malware antsoina hoe 'Ghimob' izay mifandraika amin'ny Android, saingy fampitandremana tonga lafatra izany ka tokony hojerentsika foana izay ampidirintsika ny APKS ho an'ny fampiharana sy lalao.
Ary io no mpikaroka momba ny fiarovana Nahita Trojan vaovao izy ireo izay afaka mitsikilo sy mangalatra angona amin'ny alàlan'ny fampiharana 153 amin'ny Android. Malware vaovao hita any Brezila izay miely eran'izao tontolo izao avy amin'ity firenena ity.
Nomena anarana hoe 'Ghimo', toa manondro an'izany daholo ny zava-drehetra novolavolan'ny vondrona iray ihany ao ambadiky ny malware 'Astaroth' (Guildma) amin'ny Windows. Kaspersky no mafy orina taorian'ny famoahana ny fikarohana izay mametraka antsika indray alohan'ny fampandrenesana ny niandohan'ny APK ny fampiharana sy ny lalao apetrakay.
Kaspersky milaza ny Trojan Android vaovao natolotra tamin'ny alàlan'ny fonosana fampidinana hita tao anaty rindrambaiko Android manimba amin'ny tranokala sy seriver nampiasain'i Astaroth teo aloha.
Eny, tsy mbola hita izany amin'ny fampiharana ampiarahina amin'ny fivarotana ofisialy Fampiharana sy lalao Google Play, ka raha apetrakao ato amin'ity loharano ity daholo izy ireo dia aza manahy na inona na inona.
Nampiasa mailaka sy tranonkala mampidi-doza i Ghimob mba hamindrana ireo mpampiasa amin'ireo tranokala izay ampiroboroboana ireo fampiharana "voa" ireo. Raha ny marina dia "misaron-tena" toa ny fampiharana Google izy ireo miaraka amin'ny anarana toy ny Google Defender, WhatsApp Updater na Flash Update. Raha na inona na inona antony nahalavo antsika tao anaty fandrika, ny olana dia mitoetra ao amin'ny fanomezana ireo alalana fampiharana azo idirana amin'ireo fampiharana ireo, ny dingana farany amin'ny fizotran'ny "aretina".
Miaraka amin'ny fitaovana voan'ny aretina, misy ny ireo rindranasa ireo dia hikaroka amin'ny lisitry ny 153 hanehoana pejy sandoka amin'ny logins ary mangalatra ny mari-pahaizana. Ary raha ny marina dia nitifitra ireo banky Breziliana hangalatra angona ireo fampiharana hita rehetra rehefa mampiasa ireo fampiharana finday ireo.
Kaspersky dia nanambara izany tsy mijanona any amin'ny banky Breziliana fotsiny izy ireoFa kosa, Ghimob dia nanitatra tany Alemana tamin'ny alàlan'ny fampiharana 5, Portugal miaraka amin'ny apps 3, Peroa miaraka amin'ny roa, Paraguay miaraka amin'ny 2 hafa, ary Angola sy Mozambika miaraka iray hafa isaky ny firenena.
Ka napetrakay ny jereo momba ireo tranonkala manolotra fampidinana ny APKs (tsy mazava ho azy, toy ny APKMirror mahasoa), hifantohana tsara amin'ny rindranasa ampidininay ary inona, satria mitondra ny loza mety hitranga izy ireo karazana malware rehetra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » fiarovana » Ny malware 'Ghimob' vaovao dia mikendry ny fampiharana banky
Ny Xiaomi Mi 11 dia mipoitra amin'ny GeekBench mampiseho ny fahaizany avo